काठमाण्डौ । राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा लामो समय मौन रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४० औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा काँग्रेसप्रति आक्रामक हुँदै आफ्नो मौनता तोडेका छन् ।
पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले डा. केसीको मुद्दालाई उचालेर काँग्रेसले राजनीति गर्न खोजेको भए काँग्रेसको अवसानको बाटो शुरू भएको टिप्पणी गरे ।
‘हामी डा. केसीसँग वार्ता गर्न तयार छौँ । तर, नेपाली काँग्रेसले खोजेको चाहिँ के हो ? काँग्रेस केसीको पुच्छर समातेर संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि काँग्रेसले के गर्न खोजेको हो ? के काँग्रेसले गोविन्द्र केसीमाथि राजनीतिक गर्न खोजेको हो ?’, प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, ‘के काँग्रेस एजेन्डाविहीन भएको हो ? गोविन्द केसीको माग पुरा गर भनेर सम्पूर्ण तोडफोडमा उत्रनु भनेको मेरो दृष्टिमा अब काँग्रेस सिद्धियो । काँग्रेसको अवसानको बाटो शुरु भयो ।’
प्रचण्डले डा. केसीको माग पुरा गर्ने विषयमा आफु, प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा भएको र यस्तो भेटमा देउवाले काँग्रेसको छुट्टै माग नरहेको र केसीले माने काँग्रेसले स्वीकार गर्ने जवाफ दिएको बताए ।
‘हामीले हिजो मात्रै शेरबहादुर देउवाजीसँग छलफल गरेका थियौं’, प्रचण्डले भने, ‘देउवाजीले डा. केसीलाई मनाउनुस् हामी मान्न तयार छौं । उहाँ मान्नुभएन भने हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्नुभयो ।’